Sary vongana ephemeral sy efa lany daty eo afovoan'ny natiora | Famoronana an-tserasera
Andy Goldsworth dia mpanao sary sokitra anglisy, fanta-daza amin'ny sehatra misy azy, izay mamorona antoka miasa eo afovoan'ny natiora amin'ny tehina sy vato miaraka amin'ny fanampian'ny fahaizanao mamorona sy ny fomba fanangonana izay manodidina anao.
Un Zavakanto ephemera ary izany dia mandalo mandritra ny andro maromaro mandra-pahatongan'ny natiora mihintsy izay miandraikitra ny fanaparitahana azy na ny fanaparitahana azy amin'ny alàlan'ny herin'ny rivotra amin'ny alàlan'ny famoahana ireo endrika noforonin'ity artista britanika ity.
Goldsworth, zanaka matematika, nihalehibe niasa tamin'ny toeram-piompiana talohan'ny nanararaotany nanomboka ny asany tao amin'ny Oniversite Central Lancashite. Araka ny nambarany, ny ampahany amin'ny asany dia ny fomba hisafidianana voatabia tsara indrindra eny an-tsena hahafahana manambatra azy ireo amin'ny fomba mirindra indrindra sy ahafahana mamorona ireo sanganasa hitanao eto amin'ny endrika sary.
Araka ny efa nolazaiko, anisan'ny asan'ny Goldsworth ny ephemeral ary lany daty, toy ny ravin'ny hazo sasany latsaka amin'ny fararano. Misy dikany ihany koa ny fampisehoana ny tena fahalemen'ny planeta, na dia misy fikasana sarotra kokoa aza ny fanaovana ny sarin'ity mpanao sary sokitra britanika ity.
«Rehefa mamorona zavatra aho, eny an-tsaha mihitsy na eny an-dalambe amin'ny tanàna na tanàna dia hanjavona izany, saingy misy izany ampahany amin'ny tantaran'ireo toerana ireo. Tamin'ny andro voalohan'ny asako dia nifantoka tamin'ny hevitra faharavana sy fahalovana aho. Ankehitriny ny sasany amin'ireo fanovana mitranga ireo dia tsara loatra tsy hay lazaina.»
Matetikas mampiasa ny fahatongavan'ny sasany amin'ireo sanganasany handao azy ireo toy izany, toy ny. Andy Goldsworth dia manana boky navoaka maromaro izay azonao atodihana Ity rohy ityary ny tranonkalanao manokana aiza no aleha amin'ny ampahany amin'ny asany kanto.
Mpanakanto anglisy izay sokitra ny tontolo iainana izay manodidina azy ka rehefa afaka andro dia miverina amin'ny toetrany ihany ny zava-drehetra.
Sary sokitra miavaka amin'ny tontolo iainany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mamorona sary vongana ephemeral eo afovoan'ny natiora